लहानमा कोभिड १९ मनोसामाजिक मेची महाकाली परामर्शको अन्तरक्रिया सम्पन्न
रिपोर्ट नेपाल | 2021 Jun 10 | 01:26 pm	201
सिरहा, जेठ २७ः कोभिड १९ मनोसामाजिक मेची महाकाली परामर्श अभियान सिरहाको लहानमा सम्पन्न भएको छ । लहान नगरपालिका ७ स्थित रहेको मारबाडी सेवा सदनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
उक्त अभियानको आयोजना ओम सामाज डेन्टल हस्पिटलले गरेका थिए। अभियानमा निःसुल्क एम्बुलेन्स तथा निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ सेवा अभियानका लागि बिराज समाजको समन्वय समेत रहेको छ ।
लहानका नपाका जनस्वास्थ्य अधिकृत राम सुन्दर यादवले भने बिरामी रिफर गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। अक्सिजन सहित लहान अस्पतालले १५ बेड संचालन गरेको छ भने सिरहा अस्पताल ३५ बेडको वातावरण मिलाएका हुन् ।
लहानमा नगरपालिकाको स्वास्थ सखाले पीसीआरमा बढी जोड दिने लहानका स्वास्थ अधिकृत यादवले बताए ।
स्वाब संकलन गरेर जनकपुर र बिराटनगर पठाउने गरेको हो। बिरामी पठाउनलाई लहान अस्पताल र नर्सिङ होमले सेवा निःशुल रुपमा सेवा दिनेको गरेको छ।
अभियानमा लागेका डा. सुभाष घिमिरेका अनुसार कोरोना लागेको बिरामीहरुलाई हतास नहुन् आग्रह गरेका छन् ।
म बलमान छु आफूलाई बलमान ठान्नेहरुको बढी नै देशमा मृत्यु भएको देखिन्छ । ९९ प्रतिशत ब्यक्तिहरुलाई अक्सिजन दिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हो। भाइर्स सर्ने रोग त हो भाइसर एक्लैले केही गर्न सकिदैन एक वक्ताले बताए ।
यो अभियानको उदेश्य भनेको सबैलाई सचेतनाको जानकारी गराउनु र मृत्युको मुखमा कसैले नपर्नुस भने उक्त कोभिड १९ मनोसामाजिक मेची महाकाली परामर्श अभियानको मेन उदेश्य हो। समाजसवी तथा नेताका अनुसार कुनै पनि अधुरो ज्ञानले जिबन शैलीमा घातक बन्दै गरेको छ । हाम्रो आत्मबल बढाउन सक्नु पर्छ।
नायक निखिल उप्रेतीले भने हामी उ ब्यक्तिको बिश्वास गरौं जस्ले हामीलाई मृत्युको मुखबाट फर्काउने गरेको छ। यो महामारी नै हो सबलाई थाहा छ तर कलकारखाना संचालन हुनैपर्ने बताए। गरिबीको मुनी बस्ने ब्यक्तिहरुको हालत के होला त। आत्मबल बढाउने गरौं समाजमा काम काज गर्ने वातावरण बनाऔं र कोरोनालाई जितौं भने कुरा प्रकाश पारेका थिए ।
शिक्षा विद्का अनुसार नेपालमा बन्दाबदीका कारणले गर्दा आतिएर आत्महत्या गर्ने गरेको छ। कोरोनाबाट बच्ने जुन हाम्रो समाजमा घरायसी औषधीहरु छ, त्यसले गर्दा पनि रोग निको हुने गरेको हो ।
वरिष्ठ पत्रकार दिनेश्वर गुप्ताका अनुसार लहान नगरपालिका भने निष्क्रिय भएको बताए ।
नर्सिङ होम लहानका संचालक डा. सुभाष साहका अनुसार मान्छे रोगले मर्नु भन्दा भोकले मर्ने बेला भई सकेको छ । त्यो अवस्था चाहि न निमत्याउ भन्ने कुरा प्रकाश पार्दै सबैले अ–आफ्नो ठाउँमा सतर्क रही बसौं भनी बताए ।
लहानका स्वास्थ प्रमुख राम सुन्दर यादवका अनुसार लहानका सम्पूर्ण स्वास्थ चौकीहरुमा स्वास्थ कर्मिहरुलाई खटाएको बताए। तराई मात्र हैन सम्पूर्ण देशका जनताले स्वास्थ सुबिधा पाउनु पर्छ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
लहान अस्पतालमा कोठाको अभाव रहेर कमजोरी छ । हामीले बिहिवार र शुक्रबार पिसि आरको लागि स्वाब संकलन गर्ने गरेका छौं ।
लहान अस्पतालका मेसु डा बिरेन्द्र मंडलले अहिलेसम्ममा १३ जनाको मृत्यु भएको बताए ।
सरकारी अस्पतालहरुले धान्ने अबस्थामा नरहेको र सरकारी अस्पतालहरुलाई कसरी बलियो बनाउने त्यता तिर अग्रसर हुनु जरुरी रहेको बताए। समाजसेवी जय किशोर यादवका अनुसार सरकारले भ्याकसिन लगाउन जुन उमेरको कुरा उठाउनु भको छ त्यो कुरा समाजमा नकारात्मक निकै घातक बन्दै गरेको बताए ।
उद्योग बाणिज्य संघ लहानका अध्यक्ष अशोक लाल अमात्यको अनुसार यो समाजिक अभियानमा मनोबल बढाउने र समाजिक संस्थामा लागेको ब्यक्तिहरुले अभियानमा जनचेतना जगाईदिने काम गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा एभरेष्ट कलेज लहानका संचालनक धरनीधर अधिकारी, कलेजका प्रतिनिधि ललित महतो, मानव अधिकारकर्मि शुनिल साह, लोटस स्कुलका संस्थापक सुदिप चौधरी समाजसेवी रामानन्द गुप्ता, शिक्षक सुर्यनाथ यादव लगायतका दुई दर्जन भन्दा बढी ब्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रम संचालक चक्रपानी दाहालले जानकारी दिए ।